Waa Maxay Tayada Aqooneed ee Maamulaha Wanaagsan? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 13, 2020
Halkaan waxaan ku sheegi doonaa 5-ta astaamood ee waajibka ah in la raaco, waa haddii aad doonayso inaad noqoto maamule wanaagsan. Calaamadaha lagu garto maamulaha xun waxaa kamid ah shaqada fudud ayuu ka dhigaa shaqo adag ama xun, halka maamule fiican uu sameyn karo shaqo xun oo loo dulqaadan karo. Hadaba, sidee maamule xun ugu dhigi karnaa mid fiican. Kuwani waa shan astaamood oo muhiim ah.
Dabacsanaantu waa furaha koowaad
Sahan lagu sameeyay shaqaalaha ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 40% musharaxiinta shaqooyinka caalamka ay sheegaan in jadwalka dabacsan uu ka mid yahay seddexda arrimood ee ay tixgeliyaan marka ay dooranayaan boos shaqo.
Laakiin, jadwallada is-beddelka ah ma’ahan qaybta kaliya ee ugu muhiimsan ee maareynta — la dhaqanka shaqaalaha sida shaqsiyaadka sidoo kale waa muhiim. Taas macnaheedu waa inaad ku kala duwanaan kartid sida aad uga jawaabeyso xaaladaha kala duwan. Maareeyayaasha wanaagsan waxay ula dhaqmaan shaqaalahooda si bani’aadamnimo leh. Taas macnaheedu waa inay ula dhaqmaan si dabacsan iyo isfahan leh.
2. Daacadnimadu Waa Muhiim
Aan dhahno sharraxaadda shaqo waxay leedahay “jadwal dabacsan” iyo “jawi taageero leh.” Waxaad ogaataa qeexitaanka maamul ee dabacsanaanta macnaheedu waa in aad shaqada imaan karto waqti kasta inta u dhexeysa 7:55 iyo 8:02. marwalba, oo aad iscaawisaan.
Daacadnimada macnaheeda ma’ahan mid qumman, laakiin waxay ka dhigan tahay sixitaanka dhibaatooyinka markay soo baxaan. Siinta shaqaalaha tusaalooyin qaas ah oo ah sida, goorta, iyo waxa ay horumarin karaan ayaa aad uga qiimo badan sida indho indheeynta dhibaatada ku ah shaqaalaha.
Maareeyayaasha, dabcan uma sheegi karaan shaqaalaha macluumaadka qarsoodiga ah, laakiin waxay u sheegi karaan waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inay shaqooyinkooda qabtaan. Maamulayaasha daacada ah ma sheegaan macluumaadka.
Sharciyada shaqaalaha qaar ayaa ku saleysan fikirka naxariista loo naxariisto shaqaalaha. Haddii shaqaalaha haysto cunug wakhti dhaw la dhalay, waa wax u fiican in hooyada ama aabaha cusub ay fasax u helaan oo ay la seexdaan ilmaha yar. Wadamada sida Norway ayaa hooyada wakhtiga dhaw dhashay loo oggalyahay inay muddo sanad ah ay ka maqnaan karto shaqada, halka aabaha loo oggalyahay 2 bilood.
Haddii shaqaalaha dhabarka ku xanuunaayo una baahan yihiin miis taagan ama kursi khaas ah in la siiyo waxay kamid tahay naxariista loo naxariisto shaqaalaha, waliba waxaa wanaagsan in sharci laga dhigo gudaha Soomaaliya. Maxaa yeelay shaqaalaha ayaa noqon karo qof naafo ah ama qof jir ahaan jilacsan oo aan awood fiican lahayn.
Xaqiiqooyinka kale ee naxariis laguma sharaxo sharciga. Dawladda federaalku ma lahan sharci kaa raba inaad siiso maalmo dheeraad ah oo fasax ah marka qof soddoh ah hooyadeed ay dhimato, laakiin qof naxariis leh ayaa iska leh. Ma jiro sharci jira oo kaaga baahan inaad oggolaato jadwal dabacsan si shaqaalahaagu ugu laabtaan kulliyadda jaamacadda si ay u dhammaystiraan shahaadadooda, laakiin naxariis ayaa leh.
Maareeyayaasha wanaagsan waxay raadiyaan qaabab ay ku muujiyaan naxariis, xittaa markii sharcigu uusan u baahnayn.
4. Mushaar caddaalad ah
Xeerka Xiriirka Shaqaalaha ee Qaranka wuxuu illaaliyaa xuquuqda shaqaalaha inay ka wada hadlaan xaaladaha shaqada, oo ay ku jiraan mushaharka shaqaalaha oo kale. Laakiin dadka kama hadlaan maamulaha maamula shaqaalaha.
Iskuulka Harvard Business School, Zoë Cullen iyo kan UCLA ee Ricardo Perez-Truglia waxay ogaadeen in markii ay dadka weydiiyeen inay qiyaasaan mushaharka shaqaalaha la shaqeeyo, waxaa usoo baxday qiyaasta celcelis ahaan ayaa noqotay 16% .
Dadka kama hadlaan mushaharkooda, taas oo macnaheedu tahay in maareeyayaasha shirkadaha si fudud u siin karaan dadka si aan caddaalad ahayn. Waana dhaqan-xumo qaab daran in aad si xigto ahaan ah ugu kala badiso mushaarka. Maamulayaasha waa in ay ogadaan in caddaalada ay qeyb libaax ah ka ciyaarayso nolosha guud ee aadanaha.
Maamulayaasha fiicani waa inay fahmaan in bixinta mushaar caddaalad ah ee qofkasta uu muhiim u yahay guusha; waa inay wanaag dareemaan markay shaqaaluhu kala hadlayaan magdhowgooda maxaa yeelay qof walba waa inuu sida caadiga ah uu helaa mushahar macquul ah.
Mushaharka cadaaladda ah ma’ahan inuu haysto isla mushahar la mid ah kan shaqaalaha oo kale ee isla meesha ku jira. Mushaharka cadaaladda waxa kale oo ay macnaheedu tahay in shaqaaluhu helayaan sicir suuq caddaalad ah. Daraasad ayaa lagu ogaadey in shaqaalaha baddela shaqooyinkooda ay u beddelaan mushaar awgeed. Shirkadaha aan bixinin mushaar fiican waxay kasbadaan in ay shaqaalaha ka tagaan.
5. Waxay dhisaan kooxo guuleysta oo leh hoggaan maskixiyeed
Maamulayaasha fiican uma fiirsadaan oo kali guusha ay gaareen – laakiin waxay fiiriyaan guusha kooxda ay maamulaan. Ururka Maareynta Kheyraadka Aadanaha ee ka dhisan dalka Mareykanka waxay yiraahdeen ‘si loo noqdo hoggaamiyeyaal wanaagsan, maareeyayaasha – gaar ahaan kuwa ku cusub jagada – ay tahay inay horumariyaan fikirka hoggaamiyaha.
Hogaamiyaha waa inuu u arkaa xaaladaha si ka duwan kan tabaruca shaqsiga ah uusan arkin. Hogaamiyaha ayaa diiradda saara sawirka weyn wuxuuna dadka ka caawiyaa isu keenista dadka si ay u gaaraan yoolal muhiim ah. Ma filan kartid inaad si dhakhso ah uga booddo “qabashada” door aad ku yeelato “maareeyn” adigoo aan haba yaraatee ka dhimman xirfadahaaga hoggaaminta. Maareeyayaasha wanaagsani waxay ka shaqeeyaan sidii ay u buuxin lahaayeen nusqaamahaas isla markaana u beddeli lahaayeen aragtidooda mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha.
Hogaamiyaha wanaagsan wuxuu raadiyaa shaqaalaha inay la kulmaan kaqeybgal iyo xushmeyn. Ma’aha arin sax ah; waa arin lagu dhisayo jawi dadka ku guuleysan karaan.
Waxaa jira malaayiin qaab oo lagu noqon karo maamule wanaagsan – ma jiro qaab adag oo ay tahay in maamule kasta oo wanaagsan uu raaco waqti kasta. Laakiin mabaadiida aasaasiga ah waxay maamulayaasha ka caawin karaan inay shaqaalahooda ku guuleystaan. Shaqaalaha guuleysta waxay horseedaan ganacsiyo guuleysta, kaasoo noqon doona yoolka dhammaan maamulayaasha.
Tags: Waa Maxay Tayada Aqooneed ee Maamulaha Wanaagsan?
Next post Waa Maxay Maalinta Jaceylka Adduunka?
Previous post Maxaa Sababo In Uu Wadna Garaaca Bato?